Na i Mehl Amundsen sy ny tarehin-tsary nomeny an-tsary | Famoronana an-tserasera
Miditra amin'ny tontolon'ny nofinofy medieval an'i Even Mehl Amundsen
Mehl Amundsen dia mpankafy lehibe ny tantara mahafinaritra an'i JRR Tolkien ary ny Tompon'ny peratra. Mpanakanto sary an-tsary nomerika izay milaza ny fitiavany an'ity mpanoratra ity sy ny tontolony noforoniny izay ahitana fialamboly, troll ary ents ao amin'ny tantara epiko sy angano be indrindra manodidina ny Tany Afovoany.
Manomboka eo an-doha isika amin'ny a Fanoroana an-tsary ny ady amin'ny kianjan'i Pelennor, ady noforonina notantaraina tamin'ny ampahatelon'ny novel The Lord of the Rings. Nanomboka tamin'ny fanafihana nataon'ny tafika Sauron tao an-tanànan'i Minas Tirith, renivohitry ny fanjakan'i Gondor, teo akaikin'ny faran'ny Adin'ny peratra. Ity ady ity dia roa andro monja taorian'ny Ady tao Pelargir, izay nandresen'i Aragorn, ny Orinasa Gray, ary ny tafiky ny maty ny corsairs of Umbar ary nangalarin'izy ireo ny sambony.
Izao tontolo izao Tolkien izay nanome aingam-panahy tantara an-jatony maro hafa ary fanoharana maro ary sary hosodoko nataon'ny mpanakanto tsy tambo isaina. Na i Mehl Amundsen aza dia iray hafa izay mitondra ny filàny hitady antsika amin'ny sariny ny fiampangana an'i Battle of the Pelennor Fields.
Hitanay koa ireo sary nofinofy hafa izay mitarika antsika mankany amin'ny lore avy amin'ny harry potter ary ao amin'i Amundsen indray no mankafy antsika amin'ny fahalalàny lehibe ny sary an-tsary nomerika miaraka amina endri-tsoratra izay manana toetra tsara amin'ny toerany.
Mpaka sary dizitaly izay hahagaga ny olona manana endrika nofinofy isan-karazany alao sary an-tsaina ny karazana traikefa nahafinaritra. Manaraka an'i Amundsen dia afaka mandroso ihany koa isika Fanoharana nomerika an'i Kylin izay toerana misy sary an-tsaina sy biby toy izany unicorn manana elatra koa dia manana kalitao lehibe eo amin'ny sary.
Manana ny Facebook y Deviant Art nataon'i Amundsen.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Miditra amin'ny tontolon'ny nofinofy medieval an'i Even Mehl Amundsen
Mpanakanto makiazy mamadika ny molony ho zavakanto kanto
Antsoina hoe 'Adobe Experience Design' ny Project Comet ankehitriny